Immanuel God miaraka amintsika - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Immanuel Andriamanitra miaraka amintsika
Amin'ny faran'ny taona dia tadidintsika ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Teraka olombelona ny Zanak'Andriamanitra ary tonga teto ambonin'ny tany. Tonga olombelona toa antsika Izy, nefa tsy nanana ota. Tonga olombelona tokana tonga lafatra izy, raha ny fijerin'Andriamanitra azy, araka ny nikasan'Andriamanitra azy. Nandritra ny fiainany teto an-tany dia niaina an-tsitrapo tamin'ny fiankinana tanteraka tamin'ny Rainy izy ary nanao ny sitrapony.
Jesosy sy ny Rainy dia iray amin'ny fomba mbola tsy niainan'ny olona hafa mandraka androany. Mampalahelo fa ilay Adama voalohany dia nifidy ny hiaina tsy miankina amin'Andriamanitra. Io fahaleovan-tena voafidy avy tamin'Andriamanitra io, ny fahotan'ilay lehilahy voalohany, dia nanimba ny fifandraisana akaiky amin'ny Mpamorona azy sy Andriamanitra. Loza inona izany ho an'ny zanak'olombelona rehetra.
Notanterahin'i Jesosy ny sitrapon'ny Rainy tamin'ny nahatongavany tety an-tany hanavotra antsika amin'ny fanandevozan'i Satana. Tsy nisy na iza na iza afaka nisakana azy tsy hanafaka antsika olombelona amin'ny fahafatesana. Izany no antony nanomezany ny ainy masina sy ny olombelona ho antsika teo amin'ny hazofijaliana ary nanao fanavotana ho an'ny helontsika rehetra ary nampihavana antsika tamin'Andriamanitra.
Nentina tany amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty isika. Midika izany fa raha mino isika, izany hoe mifanaraka amin'i Jesosy, amin'izay lazainy, dia manova ny fiainantsika Izy ary olom-baovao isika. Nanokatra fomba fijery vaovao ho antsika i Jesosy izay takona amintsika efa ela.
Mandritra izany fotoana izany dia nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra Rainy Jesosy. Tsy afaka nahita ny Tompony intsony ireo mpianatra.
Avy eo dia tonga ny festival manokana amin'ny Pentekosta. Fotoana nananganana ny fiangonana Testamenta Vaovao ary hamafisiko fa ny Fanahy Masina dia nomena ny mpino. Te hisolo tena an'io fahagagana io aho amin'ny andininy vitsivitsy ao amin'ny Evanjelin'i Jaona.
« Ary izaho te hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany. Fantatrareo izy satria mitoetra eo aminareo Izy ary ho ao anatinareo. Tsy te hamela anareo ho kamboty aho; ho avy aminao aho. Mbola kely ny andro dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao. Hitanareo anefa aho, satria velona Aho, ary tokony ho velona koa ianareo. Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo” (Jaona 14,16- iray).
Ny zava-misy fa mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina ary avelantsika hiray hina amin'ilay Andriamanitra telo izay iray dia mihoatra ny azon'ny fanahin'ny olombelona. Mbola miatrika ny fanontaniana hoe mino an'izany ve isika na mifanaraka amin'i Jesosy izay nitory ireo teny ireo tamintsika. Ny Fanahy Masin 'Andriamanitra mitoetra ao amintsika dia manambara amintsika io fahamarinana be voninahitra io. Resy lahatra aho fa izay mahatakatra an'io dia misaotra an Andriamanitra noho io fahagagana nahazo azy io. Ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika dia lehibe tokoa ka maniry ny hamerina ny fitiavany feno ny Fanahy Masina isika.
Rehefa avy nipetraka tao aminao ny Fanahy Masina dia atorony anao ny làlana, ianao irery ihany koa, miaina am-pifaliana, mianina ary feno amin'ny zotom-po tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy afaka manao zavatra ankoatran'i Jesosy ianao, toy ny tsy nanaovan'i Jesosy zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'ny Rainy.
Hitanao izao fa Immanuel dia "Andriamanitra miaraka amintsika" ary navela hanana fiainana vaovao ianao, fiainana mandrakizay amin'ny alalàn'i Jesosy, satria mitoetra ao aminao ny Fanahy Masina. Izay no antony ampy hifaliana sy fankasitrahana avy amin'ny fon'ny fo. Avelao i Jesosy hiasa ao aminao. Raha mino ianao fa hiverina etỳ an-tany izy ary havela hiara-hiaina aminy mandrakizay, dia ho tanteraka ity finoana ity: "Fa ny zavatra rehetra hain'ny mino".